Iindaba zesiXhosa, 18 eyoMdumba 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 18 eyoMdumba 2019
Abafundi baseClaremont baqalise umlo wasezitalatweni
Udulubhentsu ovumbuke kwizitalato zaseClaremont eKapa ngolwesihlanu obandakanya iwaka elinamakhulu amabini labafundi ukhokelele ekuhlatyweni kwabafundi abahlanu. Usomlomo wecandelo lonyanzeliso-mthetho kwisixeko seKapa umnumzana Wayne Dyason uthi abafundi abaphuma kwizikolo ezahlukeneyo baqalise umlo wasesitalatweni eClaremont kwaye kukholeleka ukuba abanye babo abangobafundi. Uthi kubangwa ngelithi ubutywala bube nendima kulo qulukubhode uqandusele ekuhlatyweni kwabafundi abahlanu nalapho ababini babalekiselwe esibhedlele. Amapolisa afumene oocelemba ababini kwakunye nezinye izixhobo ndawonye nobhelu lomsele. Unobangela walo mlo awukacaci kambe kukho neengxelo zokuba abafundi bebezintyintye kanobom ngobhelu lomsele bezibandakanya nakwizenzo zezesondo.
Ufunyenwe enetyala uJason Rohde
Ziyathabathisa kwakhona enkundleni iinkqubo zokuwiswa kwesigwebo kwityala lokubulala lengcali yentengo yezindlu umnumzana Jason Rohde ofunyenwe enetyala lokugqithis’amafu inkosikazi yakhe uSusan. Ngomhla wesibhozo kweyeNkanga kunyaka ophelileyo ujaji Gayaat Salie-Hophe kwinkundla ephakamileyo yephondo leNtshona Koloni ukwafumene uRohde enetyala lokuphazamisana nengalo yomthetho esithi abezotshutshiso babonakalise ubungqina obuluqilima bokuba le nqeberhu iyicime igama inkosikazi yayo ngokuzimisela yaza yazama ukugquka umkhondo.
Kulindeleke kusekwe ikomiti ezoncedisa ukhuseleko ezindleleni
Kumiselwe ikomiti ethwaliswe uxanduva lokukhusela izithuthi ezisebenzisa uhola wendlela uN2 noR300 kweli phondo leNtshona Koloni. Kulekomiti kuquka amapolisa kamasipala, Amagosa ezendlela ephondo, amapolisa elilizwe lo Mzantsi Afrika kwakunye namagosa aphuma kwiinkampani ezahlukileyo ezikwiziko lenqwelomoya lamazwe ngamazwe. Umphathiswa wezothutho kweliphondo umnumzana Donald Grant uthi kubonakala ngathi ukumiselwa kwalekomiti kuzakufuna ukuncediswa kobuxhaka xhaka balamaxesha. Kwisithuba seveki edlulileyo amapolisa kamasipala amabini kwakunye nomqhubi wesithuthi badutyulwe bonzakala kuhola wendlela wendlela uN2 kufutshane nomgaqo iBorcherd’s Quarry. Oka Grant uthi kufuneka kukhuselwe indlela kuba sekungamatyeli amaninzi kulungiswa ucingo oluphakathi kwendlela nemizi kodwa ngoku kufuneka ubuchwepheshe balamaxesha. Lamagosa onyanzeliso mthetho ebebizwe kulahola wendlela ngonogada abajongene nekhamera ezishicilela okwenzeka kulandlela nalapho bafike umqhubi sithuthi egqajukelwe livili. Bathe ngethuba bezama ukunceda yena kwagaleleka esinye isithuthi esivulele ngembumbulu sishiya konzakele omamibini lamagosa nomqhubi lowo ebencedwa ze babaleka nompu welinye lalamagosa.
i-DA ithi umbutho we-ANC awunamthetho
Uyigxeke kabukhali olilungu le DA kwipalamente yephondo lentshona koloni intshukumo eyenziwe ngamalungu okuhlala kunye ne ANC ngethuba egqushalaza ngaphandle kwamasango epalamente yephondo nalapho inkulumbuso unkosikazi Hellen Zille ebesenza intetho yobume bephondo ngolwesihlanu. Umnumzana Masizole Mnqasela uthi I ANC ayinaso isincwangciso solulawula eliphondo.
Umkhondo wokubulala utishala eDa Gasmkop uyavela
Kusengenzeka ukuba yindoda ebandakanyeka kwiziganeko eziliqela zokubulala ezingekasonjululwa, ethe yabanjwa ngamapolisa kumazantsi Kapa. Ebutsheni balenyanga amapolisa akwazile ukufumana umkhomba ndlela kwityala lokubulawa kwetitshala yase Da Gasmkop yango 2017. Oluphando lutsho lwavula isiciko kumatyala aliqela okubulala enzeke kweliphondo nalapho amapolisa akholelwa ukuba lomrhanelwa uyabandakanyeka kuwo. Ekuqale bekungekho bungqina ngalamatyala kodwa ngoku ngengxelo zohlolo lweDNA kukholeleka kakhulu ukuba lomrhanelwa ubanjiweyo uyoyanyaniswa nazo. Lamatyala okubulala enzeke kwidawo ezahlukileyo eziliqela ekuquka kuzo iWoseley, De Doorns, Swellendam ne Vosthila. Lendoda kulindeleke ukuba ivele enkundleni kungakudala.